Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Botswana dia miteny hoe eny indray amin'ny Elephant Hunting
Ny Minisiteran'ny tontolo iainana, harena voajanahary, fiarovana, ary fizahan-tany any Botsoana dia nanambara ny fandraràna ny Elephant Hunting tamin'ny fanambarana tao amin'ny Facebook ary nilaza fa ny fanapahan-kevitra dia vita taorian'ny fizotran-kevitra lava nifanaovana tamin'ny manam-pahefana teo an-toerana, ny vondrom-piarahamonina voakasik'izany, ny ONG, ny fizahantany fizahan-tany, ny mpiaro ny tontolo iainana ary ny mpikaroka.
Nanambara ny Minisitra fa ny fiakaran'ny isan'ny elefanta sy ny biby mpihaza noho ny fandrarana dia nisy fiatraikany tamin'ny fivelomana ary niteraka fahasimban'ny biby fiompy. Ireo mpiaro ny tontolo iainana dia nanamafy fa tsy nisy fitomboana haingana ny isan'ny elefanta ary ny trangan'ady amin'ny elefanta dia tsy nitombo ka nitaky ny fanonganana ny lalàna momba ny fiarovana.
Ny dokotera Paula Kahambu, tale jeneralin'ny Wildlife Direct, dia nanamafy tao amin'ny Twitter-ny fa ny fihazana “ny elefanta ao Botswana dia tsy hampihena ny fifandonana elefanta amin'ny olona” ary ny fiheverana ny 'fihazana etika' dia “oxymoron”. Nilaza ihany koa i Kahambu fa ny famelana ny tanàna hitifitra elefanta dia hiteraka adin-tsaina ary mety hitarika fiakaran'ny fahafatesan'ny olombelona aza satria hihombo ny fifandonana.
Ny fandrarana fanoherana ny fihazana fihazana dia napetraka voalohany tamin'ny 2014 teo ambany filoham-pirenena Ian Khama, izay fantatra ho mpandala ny tontolo iainana mafana fo.
Ny filoha Mokgweetsi EK Masisi no nitana ny toeran'ny filoham-pirenena tamin'ny taona 2018 ary nanomboka ny fizotran-kevitra hanonganana ny fandraràna ny fihazana - i Masisi koa dia namarana ny politika "fitifirana hamono olona" manohitra ny famonoana olona izay namela ny miaramila hamono ireo ahiahiana ho mpihaza.
Any Botsoana no misy ny ampahatelon'ny elefanta savanna sisa tavela (olona manodidina ny 130,000) satria ny ankamaroan'ny olona dia nitsoaka ny famonoana ivoara izay nisy fiatraikany tamin'ny mponina tany amin'ny faritra hafa amin'ny kaontinanta.